Gonadotropin ngoba Injection (GnRH) - China Ningbo Okwesibili-hormone okuthiwa i
Shuniu GnRH (efanelekayo avalele izinkomo) Gonaderelin ngoba umjovo I kazwelonke ekilasini lesine umuthi omusha wezilwane [Incazelo] Lo mkhiqizo omhlophe noma ukuvala-white nqabela-omiswe isigaxa noma powder. [Umsebenzi futhi Sebenzisa] Lo mkhiqizo ingazisa indlala wesilwane prepituitary ukukhulula hormone follicle-inkanuko (FSH) kanye ama-hormone luteotropin (LH). It kunomphumela ekwelapheni kuzo zonke izinhlobo isifo esibelethweni, ikakhulukazi izinhlumba follicular. Iphinde kuba nethonya amacala ukuthi bangawela ...
Shuniu GnRH (efanelekayo avalele izinkomo)
Gonaderelin ngoba umjovo
T kwakhe national fourth class of new veterinary drug
Lo mkhiqizo omhlophe noma ukuvala-white nqabela-omiswe isigaxa noma powder.
Lo mkhiqizo ingazisa indlala wesilwane prepituitary ukukhulula hormone follicle-inkanuko (FSH) kanye ama-hormone luteotropin (LH). It kunomphumela ekwelapheni kuzo zonke izinhlobo isifo esibelethweni, ikakhulukazi izinhlumba follicular. Iphinde kuba nethonya amacala ukuthi bangawela chorionic gonadotrophin (hCG) noma LH. Kungaba ukwelapha ukwehluleka nge-ovulation of follicle (nge-ovulation imisiwe); kungashiwo babambisane ukusetshenziswa ne kokukhulelwa yokufakelwa, futhi kungaba ngokuphawulekayo ukwandisa izinga kwesisu estrous wezinkomo. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile esetshenziselwa Ngasekuqaleni alulame ka esibelethweni emva kokubeletha emtholampilo (zingakapheli izinsuku ezingu-40 emva kokubeletha); kungase futhi isetshenziselwe estrus enesikhathi, kuphelelwe insemination yokufakelwa ukunciphisa isikhawu ukulethwa ukuze bathuthukise ngokuphelele sezinkomo okuzala.
1.Curing le izinhlumba follicular: kutuswa intramuscularly bafake Shuniu GnRH for 200 mcg ngoba elapha ezibucayi izinhlumba follicular; kutuswa intramuscularly bafake Shuniu GnRH 100 mcg ngoba elapha omnene izinhlumba follicular.
2.It Kunconywa ukuba intramuscularly bafake Shuniu GnRH 100 mcg ngoba elapha ukwehluleka ukukhiqizwa kwamaqanda.
3.It Kunconywa ukuba intramuscularly bafake Shuniu GnRH 100 mcg ngoba elapha quiescence wesibeletho.
4. Kunconywa ukuba intramuscularly bafake Shuniu GnRH 100 mcg sikhuthaza ukukhiqizwa kwamaqanda.
5. It kungenziwa babambisane esetshenziswa ne umjovo Cloprostenol sodium (PG) ukuze kuphelelwe insemination yokufakelwa for avalele izinkomo (ukusetshenziswa esibekiwe kanye umthamo, sicela ubheke 19 th ikhasi leli bhukwana, Shuniu GnRH (efanelekayo avalele izinkomo) )
Akuvunyelwe usetshenziselwe ukukhuthazwa ukukhula.
100mcg × amabhodlela 10
Elondolozwe usesimweni moya emthunzini (ngezansi 20 ℃).
Inyama izinsuku ezingu-7, Ubisi amahora 12.
Olandelayo: LHRH-A2 ngoba Injection Bovines & Swine
Mahhala chorionic gonadotropin
gonadotropin Ukuze Injection (Gnrh)
abakhulelwe Mare Serum gonadotropin